Dood Aqoon-Isweydaarsi ah oo ku saabsan Dib-u-Eegista Dastuurka oo ka dhacday London. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dood Aqoon-Isweydaarsi ah oo ku saabsan Dib-u-Eegista Dastuurka oo ka dhacday London.
Dood Aqoon-Isweydaarsi ah oo ku saabsan Dib-u-Eegista Dastuurka oo ka dhacday London.
Muqdisho(SNTV):-Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS ayaa dood Aqoon-Isweydaarsi ah oo ku saabsan sidii loo heli lahaa Dastuur dhameystiran oo Soomaali leedahay la yeelatay qaar kamid Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Waqooyiga London ee dalka Ingiriiska.
Next articleDuqa Muqdisho oo baabi’iyey heshiiyadii lagu bixiyey Jardiinooyinka